Ukwelapha umuthi wesifuba somoya COVID-19? - Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Yokungezwani Nomzimba Nomoya
Ikhaya>Ukwelapha umuthi wesifuba somoya COVID-19?
ICrayisone Spray equkethe iBudesonide
Ngokuya kocwaningo olwenziwe e-Oxford University, ukwelashwa kusenesikhathi nge-asthma drug budesonide kunganciphisa ubungozi bokuba sengozini COVID-19 ku-SARS-CoV-2 ukutheleleka futhi unciphise isikhathi sokululama.
Izifutho ze-cortisone ezilwa nokuvuvukala (i-inhalated glucocorticoids) eziqukethe i-budesonide seziyisikhathi eside zisetshenziswa ekwenzeni imitholampilo ukwelapha i-bronchial asthma. Phakathi nobhadane lwe-coronavirus, ukuhlolwa kuhlale kukhombisa ukuthi abantu balaliswe esibhedlela COVID-19 babencane kakhulu amathuba okuba babe nezifo zokuphefumula ezingalapheki. Ngakho-ke ithimba labacwaningi baseBrithani baphenya ocwaningweni lwabo ukuthi ngabe lokhu kungenxa yokusetshenziswa kabanzi kwesifutho se-cortisone. Futhi baphinde bahlola umbuzo wokuthi ngabe izifutho ze-asthma ezitholakala ngokuthengisa zingaba yini ukwelashwa okusebenzayo kwasekuqaleni COVID-19 izifo.
Ucwaningo lwenziwe njengesigaba 2, ilebula evulekile, isilingo esilawulwa ngokungahleliwe. Izifundo eziyi-146 zibambe iqhaza. Bonke babenomoya omnene COVID-19 izimpawu ezifana nokuqala kokukhwehlela nomkhuhlane kanye / noma ukuphazanyiswa okunamandla izinsuku eziyisikhombisa ubuningi ngenxa yokutheleleka kwe-SARS-CoV-2. Babelwa ngezikhathi ezithile emaqenjini amabili okwelashwa alinganayo. Iqembu elilodwa lathola ukunakekelwa okujwayelekile njengenjwayelo, kwathi elinye lacelwa ukuthi lisebenzise i-budesonide spray kabili nsuku zonke kuze kube yilapho izimpawu zazo zixazululwa.
Ukululama okusheshayo kanye nezifo ezingaphansi kakhulu zezifo
Kwabe sekuhlaziywa ukuthi bangaki ababambiqhaza okwakudingeka balaliswe esibhedlela ngenxa COVID-19 isifo. Eqenjini elijwayelekile, lokhu bekulokhu kwenzeka kubantu abayishumi, eqenjini le-budesonide koyedwa kuphela. Futhi isifutho se-asthma saba nomthelela omuhle kwezinye izinto: Ngokwesilinganiso, abantu abanokwelashwa kwe-budesonide bathola usuku olulodwa ngaphambi kweqembu elelashwa ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, babenomkhuhlane njalo futhi kwakudingeka ukuthi baphathwe kaningi ngemithi elwa ne-antipyretic (ama-27 aqhathaniswa namaphesenti angama-50). Ababambe iqhaza eqenjini le-budesonide nabo bebencane amathuba okuthi babike izimpawu eziqhubekayo ezinsukwini ze-14 kanye ne-28 zesikhathi sokubuka.
Izifundo ezengeziwe kufanele zilandele ukuqinisekisa imiphumela
Iqiniso lokuthi isifundo besingalawulwa yi-placebo sinciphisa amandla emiphumela. Yize kunjalo, ababhali baphetha ngokuthi ukuhogela i-budesonide kungaba yindlela elula, ephephile, efundwe kahle, futhi engambi eqolo yokwelapha COVID-19 kusenesikhathi futhi uvimbele izifundo ezinzima. Njengoba lesi sidakamizwa sesivele sisetshenziswa njenge-asthma inhaler, siyatholakala kalula. Imiphumela kufanele ihlolwe ngokushesha ezifundweni ezengeziwe.
Umthombo: URamakrishnan, S. et al.: Uhogele i-budesonide ekwelapheni kwasekuqaleni COVID-19 (STOIC): isigaba 2, ilebula evulekile, isilingo esilawulwa ngokungahleliwe. Ku: iLancet Respiratory Medicine, emgqeni we-publiziert am 09. Ephreli 2021
admin12021-04-22T14:48:24+02:00April 22, 2021|Blog, Ukukhangisa|Amazwana Off kumuthi wokwelapha i-Asthma ukwelashwa COVID-19?